Genius Scan dia manana ny teknolojia fizahana rakitra | Androidsis
Genius Scan no mety ho scanner antontan-taratasy tsara indrindra ho an'ny Android
Ho an'ny maro, CamScanner no ho fampiharana tsara indrindra hijerena antontan-taratasy miaraka amin'ny fakantsary ananantsika, saingy ankoatran'ity rindranasa malaza ity dia misy iray hafa mety tsara kokoa aza tahaka ny Genius Scan.
Fampiharana iray izay avy amin'ny iOS ary natomboka tamin'ny fotoana lasa teo amin'ny Android ary misy ny zavatra rehetra takiana amin'ny fampiharana an'io karazana io. Mety tsy dia be mpitia toa an'i CamScanner izy io, saingy misy vitsivitsy toetra tsara toa ny teknolojia misy azy ho an'ny fizahana pejy, fanitsiana ny fomba fijery ary fanodinana sary aorian'ny sary.
Hatramin'ny nametrahako azy taloha teo amin'ny finday avo lenta, nosoloiko ny CamScanner ary ny marina dia tao anatin'ny fotoana fohy Malahelo ilay rindranasa malaza aho ny scanner antontan-taratasy.
Ankoatry ny kalitao ankafiziny, ny fampiharana dia tena mora ny mivezivezy ary manana interface tsotra izay ahafahanao manararaotra ny fitaovany rehetra ary tsy manangona iray eo anelanelan'ny menus mifangaro. Araka ny ny kalitaony dia miafina ao ambadiky ny fitaovana ny tenany hanao scan. Amin'izao fotoana anaovanao sary izao dia hamaritra ny sisin'ny antontan-taratasy notarafina hampiharana ny fanatsarana ny sary eo anelanelan'ny B / W, ny lokony na raha tsy tianao izany.
Fitaovana matanjaka ho an'ny Android miaraka amin'ny Genius Scan
Fitaovana fototra hanodinana ny antontan-taratasy, hizarana izany na handika azy ary hataonao ao anatin'ny fotoana fohy ny scannanao. Ny hatsaran'ny Genius Scan dia ny fahatsoranySatria raha mijery ny fikirana ianao dia hahita faritra vitsivitsy hanovana, toy ny kalitaon'ny sary na raha tianao ny hampiharina ho azy ny fanatsarana.
Ny Genius Scan dia mamela anao hanao sary maro hanovana azy ireo ho antontan-taratasy iray ihany, na hamindra ny scann'ny tenan'izy ireo amin'ny antontan-taratasy iray ihany avy amin'ny mpijery rakitra. Ireo antontan-taratasy dia mety aondrana amin'ny PDF fotsiny y sary notarafina tamin'ny JPG na PDF.
Scanner antontan-taratasy tsotra nefa mahery vaika izay hanamora ny fiainanao amin'ny Android. Izy io dia manana kinova voaloa ho an'ny 4,49 € miaraka amin'ny asany rehetra feno ary ny kinova maimaim-poana miaraka amin'ny doka ao anaty ny rindrambaiko ary tsy misy ny fampiasana ny rahona hizara azy. Tadidio fa ity kinova maimaim-poana dia tsy hametraka watermark toy ny hoe manao app hafa amin'ilay fomba izy ireo.
Fanazavana fanampiny - Vakio ny tantara an-tsary tianao indrindra amin'ireo fampiharana roa maimaim-poana ho an'ny Android ireo
Genius Scan - Scanner PDF
Developer: Ny Labs Grizzly
Genius Scan + - Scanner PDF
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Genius Scan no mety ho scanner antontan-taratasy tsara indrindra ho an'ny Android
Google Play Games dia mandray sokajy kilalao vaovao 18 sy vaovao maro hafa
Arcade epic toa an'i Punch Quest koa dia lasa afaka